Global Voices teny Malagasy » Mpanao Politika Laika Nisy Namono, Nipoaka Ny Fanoherana Manerana An’i Tonizia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Febroary 2013 14:09 GMT 1	 · Mpanoratra Afef Abrougui Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Tonizia, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana
Chokri Belaid. Sary nalain'i Amine Ghrabi ny 15 Oktobra 2012, nozaraina ao amin'ny Flickr. (CC-NC)
Mbola manohy ny fanadihadihana ny mpitandro filamanana, nefa dia manameloka ankitsirano ny Antoko Islamista Ennahdha ireo fianakaviana. ‏@simonsayzzzzz , mpanao gazety iray miasa ao amin'ny Agence France Presse nandefa tweet  [fr]:
Zannoubia  nandefa tweet :
Nandà izany fanamelohana izany ny Ennahdha. Sasa Petricic  mpanao gazety mpitondra teny any amin'ny faritra Afovoany Atsinanana ho an'ny Fampielezam-peo Kanadiana nandefa tweet  hoe:
Haythem  nandefa tweet :
Leith Ben Ayed  dia niteny :
@nawaat:  an'arivony ireo mpanao fihetsiketsehana any Gafsa [Atsimo Andrefan'i Tonizia]. Potika ny Biraon'ny Ennahdha, may ireo fitaovana sy ireo antontan-taratasy maro
@nawaat:  Ao Rdeyef [tanànan'i Gafsa, atsimo andrefan'i Tonizia], nanambara fitokonana faobe ny syndikan'ny mpampianatra. Potika ny biraon'ny Ennahdha ary may eran'ny arabe ireo fitaovan'izy ireo.
@nawaat:  Ho an'i Sidi Bouzid, an-jatony ireo mpanao fihetsiketsehana mihezaka manokatra ny varavaran'ny biraon'ny mpitandron'ny filaminana ao amin'ny distrika.
Sasa Petricic nanao tweet :
Tao amin'ny làlana Habib Bourguiba [Tonis], nampiasa entona mandatsa-dranomaso ny mpitandro filaminana hanaparitahana ireo mpanao fihetsiketsehana, izay miangona manoloana ny trano foiben'ny Minisiteran'ny Atitany, mihirahira ireo teny mampiseho tsy fankasitrahana ny governemanta ary mitabataba miantso ny minisitry ny atitany hiala amin'ny asany. Ny mpitondra tenin'ny France 24 David Thomson  nandefa tweet  [fr]:
Nanampy  tamina tweet hafa izy [fr]:
Nanambara ny Ministry ny Atitany ao amin'ny pejy ofisialy facebook-ny  nahafaty mpitandro filaminana iray ny fifandonana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/02/18/45635/
 Namoaka : http://youtu.be/g8AYwrObxLs
 nandefa tweet: https://twitter.com/simonsayzzzzz/status/299132584892461056
 nandefa tweet: https://twitter.com/iloveTunisiaaa/status/299124235631206401
 Sasa Petricic: https://twitter.com/sasapetricic
 nandefa tweet: https://twitter.com/sasapetricic/status/299128167799607298
 nandefa tweet: https://twitter.com/B14ckBOx/status/299138672295559171
 Leith Ben Ayed: https://twitter.com/LeithBenAyed
 dia niteny: https://twitter.com/LeithBenAyed/status/299138533480869888
 nanao tweet: https://twitter.com/sasapetricic/status/299123828909563904
 David Thomson: https://twitter.com/_DavidThomson
 nandefa tweet: https://twitter.com/_DavidThomson/status/299148210071560192
 pejy ofisialy facebook-ny: https://www.facebook.com/ministere.interieur.tunisie/posts/575516002475780